Shabaab iyo Daalibaan... W/Q: Ibraahim Hawd - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Shabaab iyo Daalibaan… W/Q: Ibraahim Hawd
September 16, 2020 September 16, 2020 admin1215
Sida la wada og yahay bilowgii sannadihii 1990-naadii Caalamka Isaamka waxaa ka kacay maayado xagjirnimo ah kuwaas oo sheegtay in ay higsanayaan dhisidda dawlad muslin ah oo la gu hirgaliyo Shareecada. In kasta oo xagjirnimada diin-siyaasadeed ay soo jirtay ilaa lixdanaadkii qarnigii tagay, kacdoonkan dambe wax uu ka soo shidaal qaatay Kacaankii Khumeyni iyo jihaadkii Soofiyadka la gu la galay dalka Afganistaan. Labadaa dhacdo xagjirka wax ay galiyeen laba yididdiilo oo ka la ah in kacdoon diineed la gu dumin karo dawladaha faasidka ah ee ka jira Dunida Islaamka sidii loo dumiyay boqortooyadii adkayd ee Eeraan iyo in loo babacdhigi karo quwadaha waaweyn sidii loo ga adkaaday Midowgii Soofiyad.
Haddaba kumanyaal jihaad-doon ah oo dagaalkii Afganistaan ka soo waranjiiday baa niyadda caynkaas ah dib u gu la noqday dalalkii ay u dhasheen. Dawladaha Jasaa’ir, Masar iyo Sacuudiga ayay markiiba cagaha dhulka u ga rujiyeen iyaga oo ku dagaallamaya xeelado ka la duwan. Dhulka Soomaalida xilligaa ka ma ay jirin dawlad ay la dagaallamaan, wax ay se ka abuureen dhaqdhaqaaq bulsheed oo aad u weyn, ilaa la odhan karo dhab ahaan dalka waa ay qabsadeen dhinacyada ijtimaaciga oo dhan. Marxaladdaa xagjirka soomaalidu dan bay u arkayeen jiritaanka tobannaankii kooxood ee siyaasadda qabyaaladeed u legdamayay ee dawladnimada sii fogaynayay si ay iyagu bulshada u qabsadaan oo manhajkooda si xawli iyo xornimo leh u gu faafiyaan.
Xagjirka soomaalida garabkii dagaalyahanka noqday oo ahaa ururkii Itixaad raggii abaabulay badankoodu markii dambe waa ay ka shallaayeen waayo dan ahaan wax badan bay dagaalka ku waayeen ay u gu horrayso in badan oo bulshada ka mid ah oo macangagnimada iyo arxan darrada xagjirka ku baraarugtay. Xilligaa awoodda u gu badan wax ay saareen in dawlad la’aanta ay ka faa’iidaystaan oo bulshada ka dhigaan mid u diyaarsan in ay hadhow dawladdooda Wahaabiga ah ka dul dhisaan. Dhab ahaantiina ilaa heer aad u sarreeyay ayay qorshahaa ku guulaysteen, waana halka maanta dhibaatadu ka taagan tahay iyo sababta Shabaab bulshada u gu dhex milan yahay ee loo ga sooci kari la yahay.
Magaca Daalibaan macne ahaan wax uu la mid yahay al-Shabaab. Haddii Shabaab macnaheedu yahay garabka dhallinyarada ee xagjirka soomaalida, Daalibaan macnaheedu waa xer oo ah ardaydii madaarista Quraanka oo ah carruurtii mujaahidiintii dagaalka ee ku kacaantay xeryihii qaxootiga Baagistaan sannadihii dagaalka weyni ka socday dalkooda. Kolkii dalka la ga xoreeyay Soofiyadkii, reer afganistaan dawladdii ayay ku heshiin waayeen oo isku laayeen, waxaana soo baxay kooxo is wada cunaya, tabtii soomaalida ku dhacday.
Halkaas buu ka soo baxay ururka Daalibaan ee mayalka adagi, wax uuna ku guulaystay in uu dalka wada qabsado oo dawlad ka noqdo xaalad u eg tii Midowgii Maxkamadaha. Dawlad waalan oo dadka suuqyada la gu jeedlo, la gu deldelo oo gacmaha iyo lugaha la ga guro ayay dhiseen; dawlad ay xaaraan tahay in haweenku guriga ka soo baxaan oo shaqaystaan ama waxbartaan; dawlad ay xaaraan tahay in la daawado telefeeshin ama la dhegaysto raadiyow amaba la daawado filin.
Yeelkood ee intii ay dadkooda silcinayeen cidina dan ka ma lahayn, wax se kadabkood go’ay kolkii ay taageero iyo dhufays u noqdeen ururka al-Qaacida oo ku eedoobay weerarkii culayskiisa la ogaa ee Maraykanka la gu qaaday sannadkii 2001. Sidaas bay xulafada Maraykanku ku qabsadeen Afganistaan, ka gana takhalluseen dawladdii Daalibaan. Halkan ayay haddaba mar kale ka bilaabanaysaa cibrada iyo is barabar dhigga labada xaaladood ee Daalibaan iyo Shabaab.
Duruufaha guud ee ay Afganistaan iyo Soomaaliya wadaagaan ee xagjirnimada, colaadda, qabyaaladda, saboolnimada, jahliga iyo faragalinta shisheeyaha, iyaga waxaa u dheer qaybsanaan qoomiyadeed iyo mad’habeed. Waa dad ka kooban ilaa 30 qoomiyadood, isla markaa u qaybsan Sunnin iyo Shiico. Waxaas oo dhan baa la doonayaa in la xalliyo inta aan gumaysiga Maraykanku ka guurin bisha Abril ee sannadka dambe.
1. Dhibaatada soomaalidu aad bay uga fudud dahay ta reer afganistaan ee xadhigmaranka ah.
4. Hubaal waxaa ah haddii la helo awood daacad ka ah in la xallin karo khilaafka al-Shabaab, waayo tiro ahaan iyo tamar ahaan toonna ma xooggana, keliya wax ay ku nool yihiin dawlad la’aanta, quusta dhallinyarada ka haysa nolosha iyo daacad darro arrrinkooda la gu wajahay.
W/Q: Ibraahim Hawd
Booliska Cadaado oo qabtay nin lala xariirinayo Kiiskii Xamdi M .Faarax
Itoobiya oo Arday Soomaaliyeed u diiday shahaadooyinka Jaamacadda